Koorsadan oo cinwaankeedu yahay cuntada iyo cabitaanka Jarmalka, waxaan kuugu soo bandhigi doonnaa magacyada cuntada Jarmalka iyo magacyada cabitaanka Jarmalka oo leh muuqaallo waaweyn. Ka dib markaan baranno magacyada cuntada iyo cabitaanka af Jarmal, waxaan sameyn doonnaa xukunno ku saabsan cuntada iyo cabbitaannada Jarmalkan aan baranay.
Marka laga hadlayo mowduuca cunnada iyo cabitaanka Jarmalka, aan marka hore tilmaanno inay jiraan boqolaal nooc oo cunto ah iyo boqolaal nooc oo cabitaanno ah oo ku jira cunnada Jarmalka, dabcan, suurtagal maahan in la tiriyo dhammaan cuntooyinka iyo cabbitaannada casharkaan ku jira.
Suurtagal ma ahan lagama maarmaanna u ah asxaabta durbaba baranaysa Jarmalka inay bartaan dhammaan noocyada cuntada iyo cabbida hal mar. Sababtaas awgeed, waa ku filan tahay inaad barato magacyada ugu caansan uguna soo noqnoqda ee cunnada iyo cabitaanka Jarmalka markii ugu horreysay. Goor dambe, sidaad naftaada u horumarineysid, waxaad baran kartaa cunnooyinka Jarmalka cusub iyo ereyada cabitaanka.
Aan mid mid u aragno cuntada iyo cabitaanka Jarmalka. Waxaan u soo bandhigeynaa sawirada aan u diyaarinay si taxaddar leh martidaada almancax.
Cuntada jarmalka iyo sharaabaad Mawduuc la sawiray
Cuntada iyo cabitaanka Jarmalka - ku dhinta Olive - Olive
Cuntada iyo cabitaanka Jarmalka - der Käse - Jiis
Cuntada iyo cabitaanka Jarmalka - dhin Margarine - Margarine
Cuntada iyo cabitaanka Jarmalka - der Honig - Honey
Cuntada iyo cabitaanka Jarmalka - das Spiegele - Ukunta shiilan
Cuntada Jarmalka iyo Cabbitaanada - u dhinta Wurst - Sausage
Cuntada Jarmalka iyo Cabitaanada - das Ei - Egg (Raw)
Cuntada Jarmalka iyo Cabbitaanada - das Brot - Rooti
Cuntada iyo cabitaanka Jarmalka - das Sandwich - Sandwich
Cuntada iyo cabitaanka Jarmalka - der Hamburger - Hamburger
Cuntada iyo cabitaanka Jarmalka - dhinta Suppe - Maraq
Cuntada iyo cabitaanka Jarmalka - der Fisch - Kalluunka
Cuntada iyo cabitaanka Jarmalka - das Hähnchen - Digaag (la kariyey)
Cuntada iyo cabitaanka Jarmalka - das Fleisch - Hilib
Cuntada iyo cabitaanka Jarmalka - dhin Nudel - Baastada
Cuntada iyo cabitaanka Jarmalka - Spaghetti die - Spaghetti
Cuntada iyo cabitaanka Jarmalka - das Ketchup - Ketchup
Cuntada iyo cabitaanka Jarmalka - u dhinta majones - majones
Cuntada iyo cabitaanka Jarmalka - der jogurt - yogurt
Cuntada iyo cabitaanka Jarmalka - das Salz - Cusbada
Cuntada iyo cabitaanka Jarmalka - der Zucker - Nacnac
Cabitaanka Jarmalka - das Wasser - Biyaha
Cabitaanada Jarmalka - u dhin Milch - Caano
Cabitaanada Jarmalka - dhinta Buttermilch - Ayran
Cabitaanka Jarmalka - der Tee - Shaah
Cabitaanada Jarmalka - der Kaffee - Kafee
Cabitaanka Jarmalka - der Orangensaft - Casiirka liinta
Cabitaanka Jarmalka - dhinta Limonade - Liin dhanaan
Saaxiibbada qaaliga ah, waxaan ku aragnay magacyada Jarmalka cuntooyinka iyo cabitaannada kor ku xusan. Waa ku filan inaad barato inta badan magaca Jarmalka iyo magacyada cabitaanka marka hore. Markaa waxaad waqti ku qaadan kartaa barashada ereyada cusub sida aad waqtiga u hesho.
Hadda aan u isticmaalno cuntooyinkan iyo cabitaannada Jarmalka ah ee aan ku barannay jumladaha. Aynu soo qaadanno jumlado muunad ah oo ku saabsan cuntada iyo cabitaanka oo Jarmal ah.
Tusaale ahaan, maxaan dhihi karnaa? Aynu ku bilowno weedho sidaan u jeclahay baastada, ma jecli kalluunka, waxaan jeclahay liinta, waxaan rabaa inaan shaah cabbo.
Waxaan sidoo kale ku soo bandhigi doonnaa weedho muunad ah oo ku saabsan cuntada iyo cabitaanka oo Jarmal ah oo leh taageero muuqaal ah.
XUKUNYO TUSAALE AH OO KU SAABSAN Cuntada Jarmalka iyo Beerta
Ich mag Fisch : Waxaan jeclahay kalluunka
Ich mag Fisch nicht : Ma jecli kalluunka
Ich mag Joghurt : Waan jeclahay yogurt
Ich mag : Ma jecli yogurt
Gaarka ah Mag Nudel : Baasto ayay jeceshahay
Er mag Nudel nicht : Baasto ma jecla
Hamza mag Limonade : Hamza wuxuu jecel yahay liinta
Hamza mag Limonade nicht : Hamza ma jecla liinta
Wir mögen Suppe : Waxaan jecel nahay maraq
Wir mögen Suppe nicht : Maraq ma jecli
Hadda aan baranno sameynta jumlado dhaadheer sida "Waan jeclahay maraq laakiin ma jecli hamburgers". Hadda baari jumlada aan hoos ku qori doono, waxaan u maleyneynaa inaad sifiican u fahmi doontid qaabka jumlada habka midabaynta.
Umar mag Fisch, Aber er mag hamburger ma
Umar kalluunka goynta, laakiin o hamburger ma jecla
Haddii aan falanqeyno xukunka kor ku xusan; Ömer waa mowduuca xukunka iyo mag falku wuxuu ula jeedaa isku xirnaanta falka mögen iyadoo loo eegayo mawduuca xukunka, oo ah qofka saddexaad oo keli ah. Ereyga fisch macnihiisu waa kalluun, ereyga aber macnihiisu waa laakiin-keliya, er macnihiisu waa qofka saddexaad oo keligiis ah o, erayga hamburger macnihiisu waa hamburger sidaad horayba u ogayd, erayga nicht ee dhammaadka jumlada ayaa loo adeegsaday inuu xukunka ka dhigo mid taban.
Aynu mar kale xukunno isku mid ah ku qaadno. Fiiri sawirada iyo weedhaha muunada ah ee aan si taxaddar leh ugu diyaarinay booqdayaasha almancax ee hoose.
Zeynep mag maraq, Aber sie mag Nudel ma
Zeynep maraq goynta laakiin o baasto ma jecla
Ibraahim mag Joghurt, Aber er mag Mayonnaise ma
Ibraahim yogurt goynta laakiin o majones ma jecla
Melis mag Liin dhanaan, Aber sie mag kafeega ma
Melis liin dhanaan goynta laakiin o kafee ma jecla
Waxaan ku siin karnaa jumladaha kor ku xusan tusaale ahaan jumladaha ah "Waan jeclahay maraq laakiin ma jecli baastada" ee la xiriirta cuntada iyo cabitaanka Jarmalka. Hadda aan eegno nooc kale oo jumlad ah oo aan ku siin karno tusaale ku saabsan cuntada iyo cabbitaanka afka Jarmalka: Ohne iyo weedho khuraafaad.
Tusaale ahaan weedho Jarmal ah oo la sameeyay iyadoo la adeegsanayo Ohne iyo isku xirnaanta quraafaadkaWaxaan cabaa shaah bilaa sonkor ah","Waxaan cunaa pizza aan yaanyo lahayn","Waxaan cabaa kafee caano lehWaxaan ku bixin karnaa weedho sida ”tusaale ah.
Hadda aan ka dhigno jumlado ku saabsan cuntada iyo cabitaanka jarmalka adoo adeegsanaya isku xirnaanta "ohne" iyo "quraafaad".
Cunnada Jarmalka iyo waraysiyada
Aynu hadda diirada saarno wadahadalo kala duwan iyadoo la adeegsanayo isku xirnaanta ohne iyo quraafaad. Wadahadalkayagu wuxuu ka koobnaan doonaa su'aal iyo jawaab. Jarmal ahaan, isku xirnaanta ohne macnaheedu waa -li, iyo isku xirka khuraafaadka macnaheedu waa -li-with. Tusaale ahaan, marka la leeyahay shaaha waxaan cabayaa sonkor la'aan, isku xirnaanta ohne ayaa la isticmaalaa, iyo markaan shaaha sonkorta leh, isku xirnaanta khuraafaadka ayaa la isticmaalaa. Tan waxaa sifiican loogu fahmay tusaalooyinka hoose. Tijaabi weedhaha lagu sameeyay ohne Jarmal iyo khuraafaad.
ohne - weedho khuraafaad
Aynu falanqeyno sawirka kore:
Wie trinkst du deinen Tee? : Sidee u cabtaa shaahaaga?
Ich trinke Tee ohne Zucker. : Waxaan cabaa shaah bilaa sonkor ah.
Wie isst du Pizza? : Sideed u cuntaa pizza?
Ich esse Pizza ohne Mayonnaise. : Waxaan cunaa pizza bilaa majones ah.
Wie isst du Hamburger? : Sideed u cuntaa hamburger?
Ich esse Hamburger mit Ketchup. : Waxaan ku cunaa hamburgers leh ketchup.
Saaxiibbada qaaliga ah, casharkaan, waxaan ku aragnay jumlado muunad ah oo aan ka samayn karno cuntada Jarmalka, cabbitaanka Jarmalka iyo cuntada iyo cabitaanka Jarmalka.
Tags: Darajada 10aad cunnada Jarmalka cabitaanka Jarmalka, Cabitaanka Jarmalka ee fasalka 9aad, Fasalka 9aad cuntada Jarmalka, Darajada 9aad cunnada Jarmalka cabitaanka Jarmalka, german essen und trinken, Magacyada Jarmalka cabitaanka, Cabitaanka Jarmalka, Cuntada quraacda Jarmalka, Cuntada Jarmalka, Wadahadalka cuntada iyo cabitaanka Jarmalka, Jarmalka cuntada iyo cabitaanka magacyada, Cuntada Jarmalka